🥇 ▷ Agaasimaha hal abuurka ee Halo Infinite wuxuu ka tagayaa 343 Warshadaha ✅
Agaasimaha hal abuurka ee Halo Infinite wuxuu ka tagayaa 343 Warshadaha
The agaasimaha hal abuurka ee Halo: Infinite wuxuu ka tegey 343 Warshado. Tim Longo, oo ah ruug-caddaa warshadeed, ayaan qayb ka noqon doonin horumarinta ciyaarta cusub ee Halo, sababtuna tahay dib-u-habeynta jagooyinka maamulka. Longo wuxuu qayb ka ahaa horumarka Halo Infinite ilaa maanta, isagoo ah maareeye hal abuur. Laakiin sidoo kale wuxuu la shaqeeyay agaasimaha hal abuurka ee Halo 5. Sida laga soo xigtay waxa Kotaku aruuriyay, oo ku saleysan warbixin rasmi ah, Longo wuxuu qabanayay boos ka duwan toddobaadyo ka duwan kii uu ku jiray Halo Infinite. Toddobaadkanna wuxuu ugu dambeyntii ka tegey shirkadda. In kasta oo isbeddelkan; Halo Infinite wuxuu ku jiraa marxalad aad u horumarsan oo horumarkiisa wuxuuna noqon doonaa ciyaarta calanka Xbox Scarlett. Markaa waxay u badan tahay in isbeddelkani aanu adiga ku saameynayn.
«Jagooyinka iyo xilalka xubnaha kooxda badanaa way kala duwan yihiin iyadoo kuxiran baahiyaha cayaaraha, inta horumarkoodu socdo. Waxaan dhawaan laba isbedel ku sameynay kooxdeena kobcinta Halo Infinite. Soo-saareheheenayada, Mary Olson, waxay hadda la wareegi doontaa kooxda ololaha Halo Infinite sidii soo saare madaxa, iyadoo u adeegsaneysa sanooyin badan 343 si ay gacan uga geysato abuurista olole weyn oo loogu talagalay taageerayaasha.
Intaa waxaa sii dheer, Tim Longo wuxuu ka tegey kooxdeena oo aad ayaan ugu mahadcelineynaa doorkiisii ​​uu ka qaatay cayaarahayaga, istuudiyahayaga iyo adduunka Halo. Waxaan u rajeyneynaa Tim sida ugu wanaagsan mustaqbalka.
Inta hartay kooxda hal-abuurka iyo soo-saarka wali waxaa hogaaminaya Chris Lee, oo ah agaasimaha istuudiyaha Halo Infinite.
Waxaan leenahay koox fasalka koowaad ah oo abuureysa ciyaarta iyo jawaabta wanaagsan ee ka imaaneysa taageerayaasha ayaa na siisay tamar, hadda in ka badan sidii hore, si aan u abuurno Halo ugu fiican ilaa iyo haatan. Ciyaarta oo lagu sii deyn doono Mashruuca Scarlett, maalmaha ciidaha 2020-ka. Isbeddelladaani saameyn kuma yeelan doonaan maalinta la sii daayo Halo Infinite », waxaan ka aqrin karnaa bogga Kotaku.